Real Art Dance Studio – Live the Dream
No.11, 3rd floor, Zayyar Thiri Condo, Zayar Thiri St, Yangon
အကပညာရပ်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုဟာ နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ တဖြည်းဖြည်း ကြီးမား ကျယ်ပြန့်လာတာ အားလုံးရဲ့ မျက်မြင်ပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ခေတ်လူငယ်လေးတွေအကြား မတူကွဲပြားတဲ့ အကအမျိုးအစား အစုံစုံ ရေပန်းစားလျက် ရှိနေသလို အကသင်တန်း များစွာကိုလည်း တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ် လာနေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အကသင်တန်း အရေအတွက် တိုးတက်လာပေမယ့်လည်း နည်းစနစ်ကျပြီး အမှန်တကယ် ကောင်းမွန်တဲ့ သင်တန်းတွေကတော့ ရှားပါးနေဆဲပါပဲ။ အကဝါသနာပါပြီး အကပညာရပ်ကို ချစ်မြတ်နိုးသူတွေ၊ အနာဂတ်မှာ အကပညာရှင် တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည် လိုသူတွေအတွက် RealArt Entertain-Dance သင်တန်းကျောင်းဟာ အကပညာရှင်ပေါင်း မြေက်မြားစွာကို အောင်အောင်မြင်မြင် မွေးထုတ်ပေးနေတဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ “ဝါသနာရှင်တိုင်းအတွက် စစ်မှန်တဲ့ ခြေလှမ်းဖြစ်ဖို့ အစဉ်အမြဲ ကြိုးစားလျက်” ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကို လက်ကိုင်ထားပြီး စေတနာအရင်းခံနဲ့ အကပညာရပ် အကြောင်းကို စေ့စေ့စုံစုံ နည်းစနစ်ကျကျ သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါတယ်။
RealArt Entertain-Dance ရဲ့ သူမတူ အထူးခြားဆုံး အချက်ကတော့ Introduction to dancing class Free Workshop for Beginner အတန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အကကို စိတ်ပါဝင်စားပြီး အကအကြောင်း နားမလည်တဲ့သူတွေ၊ အကနဲ့ လုံးဝ ထိတွေ့မှု မရှိတဲ့သူတွေ၊ အကရဲ့ သမိုင်းကြောင်း မသိတဲ့သူတွေ၊ အက videos တွေ ကြည့်ပေမယ့် ဘယ်လိုအကမှန်း နားမလည်တဲ့ သူတွေ၊ အကနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဗဟုသုတ လုံးဝမရှိတဲ့ သူတွေအတွက် အထူးရည်ရွယ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အများနဲ့မတူဘဲ ခေတ်စားနေတဲ့ အကမျိုးစုံရဲ့ introduction တွေကို လေ့လာခွင့် ရမယ့်အပြင် ဒီသင်တန်းပြီးသွားရင်တော့ ကိုယ်ဘယ်လို အကမျိုးကို ကြိုက်နှစ်သက်တယ်၊ ဘယ်အကကို ဆက်သင်ချင်တယ် ဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်သဘောပေါက်သွားမှာပါ။ အကနဲ့ ပက်သက်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှု၊ ိစတ်ပါဝင်စားမှုတွေလည်း ပိုပြီး ခိုင်မာ ပြတ်သားလာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကကွက်တွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး လက်တွေ့သင်ကြားမှု တစ်ခုသာမကဘဲ အကအမျိုးအစားတွေရဲ့ သမိုင်းကြောင်း ဗဟုသုတများနဲ့ Hip Hop Dance Foundation များကို အခေါ်အဝေါ်နဲ့ တွဲဖက်ပြီး International ပုံစံအတိုင်း စာတွေ့လက်တွေ့ စနစ်တကျ သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကနဲ့ ပက်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အရည်အချင်း ပြည့်မီပြီး ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာတွေကိုယ်တိုင် အနီးကပ် သင်ကြားပို့ချ ပေးမှာဖြစ်ပြီး ကကွက်တစ်ခုချင်းစီကိုလည်း အသေးစိတ် သင်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
RealArt Entertain-Dance မှာတော့ ကြိုးစားရင် ကြိုးစားသလို အခွင့်အရေးတွေကို ဖန်တီးချပြပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းသားတွေ အနေနဲ့ ကိုယ်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးသား အတန်းတစ်တန်းကို Free ပြန်တက်နိုင်ခွင့်အပြင် ဆရာတွေနဲ့ အဆက်အသွယ် မပြတ်ဘဲ အကအကြောင်း သိလိုသမျှ လေ့လာနိုင်ဖို့အတွက် Facebook Secret Group တွေကိုပါ ဖွဲ့စည်းပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Stage ပေါ်မှာ ဖျော်ဖြေနိုင်တဲ့ အနေအထားတစ်ခုအထိ ရောက်လာတဲ့အခါ RealArt ရဲ့ ပွဲတွေနဲ့ ရိုက်ကူးရေးတွေမှာ ပါဝင်လက်တွဲ ဖျော်ဖြေခွင့်ရမှာပါ။ ဒါ့အပြင် RealArt Family အနေနဲ့ RealArt Dance Crew တို့မှ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေမှာလည်း လက်တွဲလုပ်ဆောင်သွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကကို အမှန်တကယ် ထဲထဲဝင်ဝင် ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက် သွားပြီဆိုရင်တော့ အကပညာရပ် နယ်ပယ်မှာ ဒီလိုအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
1. Dance Teacher2. Choreographer
3. Dancer for music videos and commercial videos
4. Dance Trainer or Instructor
[vc_carousel_parent wdo_slide_loop=”true” wdo_auto_play=”true” wdo_hover_pause=”true” wdo_nav_arrows=”true” wdo_slidein_animate=”no-animation” wdo_slideout_animate=”no-animation”][vc_carousel_image_over_image wdo_image_effect=”style1″][vc_carousel_image_over_image wdo_image_effect=”style1″ wdo_front_image=”4638″][vc_carousel_image_over_image wdo_image_effect=”style1″ wdo_front_image=”4637″][vc_carousel_image_over_image wdo_image_effect=”style1″ wdo_front_image=”4640″][vc_carousel_image_over_image wdo_image_effect=”style1″ wdo_front_image=”4639″][/vc_carousel_parent]
Interview Video များ
09 44448 7889